Ngaba ukuthengisa kuyatshintsha ngokuKhulu? | Martech Zone
Ngaba ukuthengisa kuyatshintsha ngokuKhulu?
NgoMgqibelo, Julayi 5, 2014 Douglas Karr
Le infographic idibanisa kunye neziphumo ezilungileyo ezivela kwi- Ii-CMO zokuqonda ze-Accenture zika-2014, kodwa ndiyoyika ukuba ivula ngesihloko sedrama esichazwe gwenxa. Ithi:
I-78% yabaphenduli iyavuma ukuba intengiso kulindeleke ukuba yenze utshintsho olukhulu kule minyaka mihlanu izayo.
Ngentlonelo, andivumelani. Marketing Ukutshintsha kunye nedijithali iphambili kwizicwangciso ezininzi. Uhlahlo-lwabiwo mali luyatshintsha, izicwangciso zentlalo kunye nomxholo zonyukile, kwaye izixhobo ziya ziphucuka ngakumbi kwaye zifikeleleka kumashishini aneebhajethi ezincinci. Kodwa ukuthengisa - ukufunyanwa, ukugcinwa kunye nokuphakanyiswa zibaluleke kakhulu kunangaphambili.
Ndingathanda ingxelo ye-Accenture ebhalwe ngqindilili ye-infographic:
Ii-CMO: Ixesha lotshintsho lwedijithali okanye umngcipheko oshiyekileyo ecaleni
Intengiso iguqukile… kodwa abathengisi abaninzi, iiarhente zentengiso, kunye neendlela zokuthengisa azikhange ziguquke kunye namaxesha. Ewe kunjalo, kulungile kwii-arhente ezintsha zosasazo ezixhasa ngokufanelekileyo ezi nkokeli zeqhinga ukuzisa izicwangciso zazo phambili. Kodwa akukho ngaphandle kwentlungu. Amajelo emveli ayaqhubeka nokuzama ukuyalela lonke uhlahlo-lwabiwo mali ngelixa imithombo yeendaba emitsha izitshatile kwaye ikhula.
Into ekufuneka inike, kungekudala, kwaye ndiyakholelwa ukuba ikhefu liza kuba kwiindlela zesintu ezinje ngokuprinta nokusasaza. Ukuba ungumthengisi wentengiso olwa nokuqhubela phambili, unokufuna ukwandisa ubungakanani bezicwangciso zakho kwaye ufumane uncedo ukuqala inguqu kwimidiya yedijithali.
tags: 2014Isifundo se-cmocmo isifundoUcwaningo lwe-cmokwi-infographic
Yongeza iFayile yeMifanekiso ePhawulweyo kwi-RSSPress feed yakho
Yandisa amathuba okuba umxholo wakho ube yintsholongwane ngezi zi-5 Tactics